पत्रकारहरुद्धारा देशभर विरोध प्रदर्शन | eAdarsha.com
पत्रकारहरुद्धारा देशभर विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं, २६ पुस । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्नमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्ने गरी आएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन भएको छ।
बुधबार पत्रकार र मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थालगायतले राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेका हुन्। राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। पे्रस युनियन र Þयुमन राइट फर साउथ एसियनले सिंहदरवारको दक्षिण गेटमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। प्रहरी हस्तक्षेपका बाबजुत पत्रकार र अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको निर्देशनको विरोध गर्दै सभा सम्पन्न गरेका छन्।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री भट्टर्राई युद्धकालीन ‘लालध्वज’ को रूपमा प्रकट भएको आरोप लगाए। विरोधसभामा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सशस्त्र द्वन्द्वकालको जनसत्ताका प्रमुखको हैसियतमा आफैमाथि कारबाही हुने डरले प्रधानमन्त्री बर्बराएको आरोप लगाए। पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले प्रधानमन्त्री भट्टर्राईका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बेइज्जत भएको बताए।चिकित्सक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं, पत्रकार हरिहर बिरहीलगायतले पत्रकारका हत्यारालाई बँचाउन खोजेर प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले मतियारको काम गरेको आरोप लगाएका थिए।